Sh.Samaroon ayaa dirsaday SNM faalada 3 dan caddaymood iyo Halka lagu tirinaayo dhamaan dhiig qubashadii Somaliland soo martay!! Dr.Khadar | Cadceed newssite
Sh.Samaroon ayaa dirsaday SNM faalada 3 dan caddaymood iyo Halka lagu tirinaayo dhamaan dhiig qubashadii Somaliland soo martay!! Dr.Khadar
Sideedaba indhaha wajiga ku yaala markay bad-qabaan waxay arkaan walax kasta oo araga indhaha wajigu ay qabtaan; hayeeshee indhaha qalbiga waxa lagu arkaa – ama cilmul baadinka ( xaqiiqada xogaha dahsoon ee dunida iyo kuwa dalka aad ku nooshahay) waa deeq illaahay bixiyo oo laasimka duco iyo dikri food saar u ah.
Xaqiiq aan xaqiiq loo dhaafaa jirin waxa ah ( Guulaha Aadamuhu gaadhay ama Guulaha ku soo fool leh qof , qolo, qabiil, gobol ama qaran waxa sunne buuxa oo aan shaki laheyn u ah dhimasho iyo dhiig daata ; sida gaadhi walba shidaal uu taayirka ku wareejiyo ugu baahanyahay!! dhiigaasi wuxu noqon karaa mid xoolaad ama mid bini-aadam ).
Qiimaha iyo qaayaha dhiig qubashada quman:
1. Illaahay wuxu malaa’iigta ku war-galiyey in uu abuurayo Binu-aadam uu arlada/dunida masuul uga dhigo, malaa’iigtu waxay ku jawaabeen illaahaw ma mid dhiig ku daadiya oo fasahaadiya ayaad u dhiibaysaa arlada iyadoo annagu aanu kuu tasbiixsaneyno oo ku dahirinayno!! u fiirso mudane akhriste sharafka dhiigaa Nabi Aadam-caleyhi salaam hortii dhulka lagu daadiyey ee ka qubtay isdilka khal-qigii inaga horeeyey ee ay malaa’igtu ogeyd ** waxa uu gogol dhig u ahaa sirta abuuranka , jiritaanka Aadmiga iyo masuuliyada tallada arlada !!.
2. Nabi Ibrahim-caleyhi salaam sharfintii uu sharfay 2dii malag ee suurada Bini-Aadamka isku soo eekaysiiyey nabi ibraahin marti gashiimo wuxu uga dhigay gawraca ama ka dhiijinta dhiiga dibi shilis !! ka dhiijinta dibigaa uu nabi ibraahim gawracay waxa xigtay ( guusha bishaaradii nabi ibraahim ay malaa’igtu ugu bushaareeyeen *** waladan caliim *** Nabi isxaaq caleyhuma salaam ) u fiirso sharafka dhiigaasi lahaa wuxu gogol dhig iyo ceelalyo u ahaa dhalashada nabi isxaaq iyo in silsilada nabinimadu marto hidihiisii.
3. Riyadii nabi ibraahim uu ku riyooday isaga oo gawracaya wiilkiisa ismaaciil , taas oo imtixaan rabi aheyd; sidaad wada ogtihiin illaahay wuxu ku furtay wiilkii yaraa ee nabi ismaciil gawraca ama ka dhiijinta dhiiga wankii weynaa; sharafka dhiigaa wanka weyn ee lagu furtay ismaciil ayaa gogol dhig iyo ceelalyo u a haa in Nabi ismaciil sii jiro, tarantiisa iyo tafiirtiisana uu ka mid noqdo ( khaatimul-ambiyaa ama kheyrul khalqi-laahi Nabi maxamed scw); gawraca wankaasi furashada xisaabsanaa qiimaha iyo qaayihiisa waxa uu ka mid noqday tiir ka mid ah tiirarka xajka.
4. Nabi maxamed awoowgii cabdi mudalib nidarkii uu illaahay lagaley ee ku beegmay cabdilaahi ibnu cabdi mudalib nabi maxamed aabbihii , waatii reer abtigii ku furteen badalkiisa gawraca boqol geela ah oo gole joog ah, oo xisaabsan halka aynu ka keennay xeerka magta ninku in uu noqdo 100 geel ah; furashada cabdilaahi ee gawraca 100 kaa geela waxa ay gogol dhig iyo ceelalyo u aheyd dhalashada , jiritaanka iyo nabinimada nabi maxamed SCW oo waatii Nabigu la haa ( waxa aan ahey Nabigii 2da gawrac dhexdooda ) oo ah sababta astaanta u ah jiritaankiisa, Nabinimada iyo mudnaanta weyn ee darajada sare kheyru-khalqi-laahi.
5. Dagaalkii 2aad ee aduunka 18 milyan oo qof ayaa ku dhintay sida taariikhdu wariso; qubashada dhiigaasi waxa uu calanka u siday guusha ( Dib u soo laabashada isra’el ee Qudus- Bariga dhexe iyo soo bixistaanka horyaalka quwada koowaad ee dunida ee maraykan ka).
6. Dagaalka ka qarxi doona Boqortooyada sucuudiga ee bilawgiisana ugu hor holci doona 3Nin ee isku qabsan doona Boqornimada dalkaasi sucuudiga, kadibna si ba’an ugu baahi doona wadanka oo dhan; dhiig daadinta dagaalkaasi oo xataa kabcada soo gali doona; sirta ku jirtaa waxay tahay in uu yahay gogol dhig iyo bilowga ( waaga cusub oo u baryi doona islaamka iyo dunida oo uu gadhwadeen ka noqonayo (Mahdigu).
7. Aroosyada reerka cusub maalintiisa u horeysa gawrac iyo dhiig xoolaad baa la daadiyaa oo xisaabsan gogol dhiga reerka yagleesha ah in uu u noqdo xirsi xidh iyo dayr !! xataa ilmo yar marka uu dhasho waxa sunne iyo jiritaankiisa lagu aasaasaa gawrac xoolaad; sidaa daraadeed : ( sirta ku jirta dhamaan dalka dibadiisa iyo gudahiisa dhiigagii iyo qudh-gooyooyinkii dalka dadkiisii ka dhex-dhacay ee ay SNM soo qubtay iyo kii laga qubay SNM , dhiigii sokeeye ee ku qubtay Awdal, Maroodi-jeex, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag ; fool-xumooyinkii dhacay iyo dhiig qubashadii baahsaneyd ee illaa maanta Sool iyo Sanaag ka sii qiiqaysa dhamaantood waxa ay gobbo’da’ iyo gabagabada u soo biyo shubanayaan gogol dhiga guusha furashada dalka iyo xaaladaha koritaanka ee dib u curashada markale jamhuuriyada Somaliland!! Sababtu waxa ay tahay Beeriba beerta ay ka waxsoo –saar iyo midho wanaagsan tahay ayaa digada xoolaha iyo saxarada dadka ee qudhunka ah lagu nafaqeeyaa!!).
Faalada 3dan caddeymood ee Sh.Samaroon ku dirsaday SNM:
Dhulka diimuhu ku dhasheen ee ay ku hana-qaadeen waxa ay u qaybsamaan 2ba qaybood oo kala ah ( baladul ambiyaa iyo baladul awliyaa) Somaliland waxa lagu tiriyaa in ay tahay baladul awliyaa!! Islamarkaana dadweynaha maanta ku dhaqan ay ka farac iyo isir qabaan culimo ama rag awliyo alle ah; waliyadan qawmiyadihii ka farcamay Somaliland waxa yaala: sheikh Ciise, sheikh Samaroon, sheikh Isaxaaq iyo Harti.
Kor-joogihii ingiriiska ee Somaliland u soo hilib doontay xilligii uu dalka joogay waxa u qorshaysnayd in Somaliland noqoto dal iyo dad jira oo qaata xornimo buuxda; hayeeshee waxa xero ka saar iyo fool-hallow qaadsiiyey dabaylihii iyo daruurihii siday gufaacooyinka xiisaha xeelada ka madhnaa ee fikirka 5 soomaaliweyn raadiska la ciir-ciirayey ee uu beeray caashaqeeda madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo xisbigiisii SNL rabi ha u naxariistee; xildhibaanada ka soojeeday degmada Borama iyo Saylac ee xilligaa iyaga oo ka wakiila soo jeedintii sheikh Samaroon may ogoleyn oo raali kumay aheyn oo waxa ay soo jeediyeen in Somaliland noqoto jamhuuriyad iskeed isku taagta oo laga daayo in aan tallada lageynin xamar si aan loo murugoonin; soo jeedintaasi lama dhageysan , waxa hafiyey mawjadaha qiiradii iyo laab-lakicii xiisaha xamar raadiska ku dhisnaa ee 33 kii xildhibaan ee Somaliland; xamar la tag !! 1/7 1961 laga bilaabo sabankaa iyo wixii ka danbeeyey waxa isa-soo taraayey dulmi baahsan , daacad daro, dulleyn , deeq yaraan, dill , barakicin iyo xero kasaar dhamaantood ku jihaysnaa reer Somaliland; ta ugu weyn ee gaasta kabriidka sii qabadsiisay waxa aheyd 1977 dagaalkii Somalia iyo ethoipia kadib waxa killinka shanaad ka dhacday qax iyo barkac dagaalkaasi sababay iyo abaar xilligaa timi oo u gogol xaadhay boqolaal kun oo killinka shanaad ka soo qaxay talliska xukuumadii maxamed siyaad bare dajiso kaamam qaxooti ahaan ah inta u dhaxaysa ( Barbera illaa xariirad gaar ahaan meelaha biyaha leh ) dadkaas oo lagu qiyaasi karo 300,000 oo 90% isir ahaan ay hayb wadaag ahaayeen madaxweyne siyaad bare, ( Borama illaa darbi xoore waxa 2daa qoxooti joogay khalqi dhan 130 kun oo qof; inta kalena ( wajaale illaa Berbera inta u dhexaysa ayey daadsanaayeen gaar ahaan meelaha biyaha leh) waxa soo if baxday aragti aan ugub ku aheyn dhaqanka raacatada oo odhanaysa ( Hadii dadka 300,000 ee isir ahaan u badan haybta maxamed siyaad ee lagu beerayo inta u dhaxaysa Berbera illaa c/qaadir-saylac sii joogaan dhulka waxa hubaal ah in ay idinkala wareegi doonaan ) taasi waxa ay si weyn u soo dedajisay ku dhawaaqidii jabhadii SNM LONDON 1982.
Sidan ayuu sheikh samaroon SNM dagaalka ugu dirsaday!!.
1.Sheekh Samaroon SNM dagaalkii dib u xoreynta Somaliland isagaa u dirsaday , waayo 1960 xildhibaanadii samaroon may rabin in xamar lagu darsado; hayeeshee xiisaha xamar doonka ahaa ee xilligaa oognaa ayaa ka xoog batay; taa badalkeedii rabi ha u naxariistee 1960 sheikh samaroon waxa uu ijaasada soo dhicinta talladii weecatay gacanta midig uga dhiibay wiilka uu adeerka u yahay ee ( mujaahid c/raxmaan axmed cali raxmatulaahi caleyhi wa calaa jamiical mujaahidiin ), aabbaha iyo aasaasaha somalilandta cusub ee maanta waxa daliil u ah taas mujaahid C/raxmaan tuur markii uu soo dhameystay waxbarashadiisii dalka sudaan shaqadiisii ugu horeysay waxa uu ka bilaabay degmada Borama 1960 !! markale waxa uu shaqadiisii Somaliland ku soo gabagabeeyey isla degmada Borama 1993 kadib hagar la’aan markuu u soo gutahay culeyskii saarnaa ee dibu xoreynta dalka; ku darsoo hogaankii SNM badankoodu waxa ay tacliinta sare ee dalka ka qaateen dugsigii sare ee ingiriisku dhisay CAMUUD , iyaguna si dad-ban ayey dardaaran u qabeen, haday mujaahid axmed siilaanyo tahay iyo haday muuse biixi tahay intaba madaxweynahay maanta ee Somaliland; si ka fudud daliilka aan kuu tuso; beelaha waaweyn ee Somaliland sidii ay ugu kala jireen halgankii hubeysnaa; HARTI waxa lagu tirinaayey in uu la hayb yahay madaxweynihiii xilligaa maxamed siyaad sidaa darteed kumuu jirin SNM, SNM waxa ku dhameyd badi beesha dhexe iyo in door ah oo beesha ciise ah, Beesha samaroon midhadh dhiiri galin iyo kormeer ah ayaa ku jiray SNM oo sheikh ku xoojinayey; oo ay ka mid ahaayeen mujaahid c/raxmaan aw cali faarax iyo mujaahid jaamac rabiile good, Somaliland ayaa la xoreynayey sax waxa aheyd in laga wada tashado sidii loo xoreyn la haa oo loo dhamaado hayeeshee beesha dhexe kalideed iyo ciise oo mar dambe ku biiray ayaa hawlaha gardaadinaayey , ku jirid la’aanta beesha samaroon waxa ay kuu cadaynaysaa in ay tahay cida dhabta ah ee dirsatay SNM ogaal iyo ogaal la’aan intaba oo ay sidaa ku ahaayeen hogaanka dahsoon ee SNM.
2. markii SNM dalka dib u xoreysay ee uu dhacay taliskii macangaga ahaa ; kooxihii hubeysnaa ee SNM ee qardoofooyinka iyo xurgufaha aan xikmada badan ku dhisneyn u dhaxaysay ayaa meel walba isku adeegsaday hubkii gacantooda ku jiray, xaalku uu fogaaday, dagaalo sokeeye ayaa qarxay , miil-walba dabku uu ka qiiqaayey sabankaa oo Baroor iyo oohin baa taalay, dirirta iyo dagaalka sokeeye ee u dhexeeyey inta badan beesha dhexe ayaa ka holcaayey magaalooyinka (Hargaisa, Barbera iyo Burco) markale waxgaradkii iyo waayeelkii reer Awdal oo adeegsanaya karaamadii SH.Samaroon ayuu illaahay gacantooda ku damiyey dirirtii iyo dilkii arwaaxaha sokeeyaha oo waatii la isku af-gartay sabankaa meel waliba oo Somaliland ah dab iyo Aano ayaa ka qiiqaaya Borama ayaa ka baladul Aamin ah; meeshaa meel aan aheyn lagu ladi kari maayo e’ dhamaan ergooyinka Somaliland, siyaasiyiinta, nabadoonka, cuqaasha iyo waxgaradku Borama ha isku wada shubaan, halkaas ayey ka tisqaaday walaaleyntii , isfahankii, dhan u wada-jeesadkii oo mudo 6 bilood ah baanasho iyo is-laab xaadhasho loo yagleel dhagayey; tani waa astaan ku tusinaysa in marka horeba sheikh samaroon dirsaday SNM markii xigtaynay Borama isugu yeedhay oo uu nabadeyn iyo walaaleyn u bud-dhigay dhamaan reer Somaliland.
3. ugu dambeyn dawladaa Somaliland maanta ka jirta waa dawladii hab beeleedka ku dhisnayd ee guriga samaroon lagu soo dhisay ee uu sheikh samaroon illaahay idankii barakada Borama ka soo raaciyey murtiduna ayey tahay in dawladu dadka iyo dalka wada gaadho afarta gees intaba; tani waxa ay ku tusinaysaa in sheikh samaroon ahaa hogaanka ruuxiga ah ee SNM.